Xukun deg deg ah oo lagu soo rogay Port Saciid - BBC Somali - Warar
Xukun deg deg ah oo lagu soo rogay Port Saciid
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 27 Janaayo, 2013, 20:54 GMT 23:54 SGA
Rabshado ayaa ka socda magaalada Port Saciid iyo magaalooyin kale waxaana dhintay ilaa 35 qof.
Madaxweynaha Masar Maxamed Morsi ayaa ku dhawaaqay hal bil oo xukun deg deg ah magaalada Port Saciid kadib banaanbaxyo rabshado watay. Wuxuu sheegay in la soo rogi doono waqti aan la socon karin habeenkii.
Qudbad uu ka jeediyay telefishinka ayuu ku sheegay, in dowladda ay ka hortagayso wax walba oo qatar galiya ammaanka Masar.
Maanta ugu yaraan shan qof ayaa ku dhintay Port Saciid, markii la aasayay dad ku dhintay rabshado dhacay shalay.
Afrika Nelson Mandela oo Johannesburg ku geeriyooday
Nelson Mandela ayaa geeriyooday
Jacob Zuma ayaa ku dhawaaqay geerida
Dareenka hogaamiyayaasha caalamka